Casino FastPay - Goob rasmi ah, diiwaangelin 2021
Khadka tooska ah ee FastPay
Macluumaad aasaasi ah oo ku saabsan bogga Fastpay
Gunooyin iyo dhiirigelin
Shabakada dalxiis ee 'Fastpay Casino portal' waxaa la aasaasay dhawaanahan - xagaagii 2018. Muddo aad u yar gudahood, degelku wuxuu si guul leh ku kasbaday sumcad adag iyo dhagaystayaal ballaadhan oo macaamiisha caadiga ah, oo sii kordhaya. Abaabulayaashu waxay diiradda saarayaan bixinta ciyaaro caddaalad ah oo hufan, oo soo jiita khamaarayaasha una oggolaanaya inay ku raaxaystaan run ahaantii goobaha internetka.
Fastpay Casino wuxuu ku shaqeeyaa shati nambarkiisu yahay 8048/JAZ2020-013 wuxuuna ku shaqeeyaa Dama NV, wuxuu ku shaqeeyaa awooda Curacao. In kasta oo ay da 'yar tahay, waxay ku jirtaa liiska ugu fiican casinos online. Tani waa dammaanad qaadka amniga iyo caddaaladda, sidaa darteed xitaa dadka isticmaala khibrad la'aanta kama cabsanayaan inay doortaan degelkeeda rasmiga ah xilliyada firaaqada ee xiisaha leh.
Fikradda casino waxay diiradda saareysaa bixinta macaamiisha si dhakhso leh lacag dhigis iyo hubin xisaabeed fudud. Isticmaalayaasha waxaa loo damaanad qaaday bixitaanka ugu dhaqsaha badan ee lacagaha lagu guuleystay iyo xaqiijinta raaxada leh. Ka dib isbeddellada casriga ah, casino Fastpay wuxuu leeyahay nooc mobilo ah, iyo sidoo kale muraayadaha shaqada, oo si weyn u ballaariya fursadaha khamaarka. Wada-hawlgalayaasha naadiga dhexdiisa, waxaad ka arki kartaa bixiyeyaasha caanka ah ee adduunka ka shaqeeya warshadaha khamaarka in ka badan labaatan sano.
Soo-booqdayaasha degmadu waxay xusayaan jawiga wanaagsan ee websaydhka rasmiga ah iyo meesha ugu habboon ee ay ku yaallaan dhismayaasheeda waaweyn. Boodhadh dhalaalaya ayaa midba midka kale beddelaya, oo muujinaya martida iyo xubnaha diiwaangashan ee naadiga FastPay Casino dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah, iyo sidoo kale kicinta xiisaha waxa ka dhacaya derbiyadeeda dalxiiska.
Bogga ugu weyn wuxuu ka kooban yahay diiwaangelin, soo galid iyo tab tab. Isdhexgalka macquulka ah ee koox kooxeed ayaa sahlaya in la maro xitaa kuwa bilowga ah. Khamaarayaasha ka kala yimid dalal kala duwan ayaa dareemi doona raaxo boggeeda, maxaa yeelay waxaa loogu talagalay tiro badan oo luqado kala duwan ah:
Isbaanishka, Iswidishka, Noorweey, Finnishka, Malaayka, Kazakh, Turki, Faransiis, Czech, Jabbaan iyo kuwa kale oo badan ayaan iyagu quseyn.
Qaabka bogga rasmiga ah ee 'Fastray' waxaa lagu kala saaraa midabbo dhalaalaya, sidaa darteed way ku faraxsan tahay. La'aanta macluumaad aan loo baahnayn iyo naqshad wanaagsan ayaa kuu oggolaanaysa inaad si dhakhso leh uga baxsato dhibaatooyinka maalinlaha ah, adoo madaxaaga u galaya noocyo badan oo madadaalo khamaaris ah.
In kasta oo xaqiiqda ah in diiwaangelinta bogga rasmiga ah ee Fastpay Casino loo baahan yahay oo keliya kuwa go'aansaday inay xubin rasmi ah ka noqdaan naadiga oo ay bilaabaan inay u ciyaaraan lacag dhab ah, dadka isticmaala waxay ku maraan iyagoo faraxsan. Diiwaangelinta isticmaalaha :
waxay muujineysaa ujeedooyin culus oo khamaariiste;
waxay u oggolaaneysaa macaamiisha goobta inay ku raaxeystaan mudnaan badan, sida gunno, lacag la’aan, dallacsiinno, lacag celin;
waxay muujineysaa in xubinta cusub ee naadiga ay ogolaatay shuruudaha bogga isla markaana ay gaartay da'da qaan-gaarka.
Si aad uga dhex abuurto koontada ciyaaraha ee casino, kaliya gal goobta goobta oo riix badhanka diiwaangelinta. Waxay qaadataa waqti yar oo macnaheedu yahay:
buuxinta astaanta isticmaalaha oo leh lambarka sirta ah iyo cinwaanka emaylka;
doorashada lacagta koontada;
xaqiijinta helitaanka ogeysiiska ee qaabka dirista;
barashada xeerarka iyo siyaasadaha hay'adda;
xaqiijinta ku habboonaanta sanduuqa boostada.
Qodobka ugu dambeeya waxaa lagu fuliyaa adigoo gujinaya xiriirinta hawlgelinta, taas oo ku jirta warqadda maamulka bogga. Markuu noqday milkiilaha akoon shaqsiyeedka casino FastPay, khamaariistuhu wuxuu aadayaa qaybta "Xogta Xogta" wuxuuna buuxinayaa dhammaan qaybaha lagama maarmaanka u ah si maamulku u helo macluumaad ku saabsan ciyaaryahanka.
Kibirka goobta waa xulasho ballaaran oo madadaalo ah. Kuwa ugu caansan waa mashiinnada ciyaarta, laakiin halkan waxaad sidoo kale ka heli kartaa:
miisaska leh ganacsatada tooska ah.
Hoolka khamaarka ee Fastpay wuxuu leeyahay in ka badan 2500 boos. Waxaa soo bandhigay afartan waratada, kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah: Evolution, NetEntertainment, Microgaming, Yggdrasil Gaming, Playtech, Endorphina, Play N 'Go, Igrosoft, Nextgen, iwm. iyo deeqsinimo.
Liiska qolka ciyaarta:
boosaska - qayb leh mashiinno farshaxan;
cusub - dhammaan boosaska dhowaan ay sii daayeen bixiyeyaasha waxayna ku soo baxeen buugga bogga;
nool - in ka badan 150 kulan oo leh croupiers dhab ah;
roulette waa madadaalada caadiga ah ee khamaar kasta;
iibso mustaqbalka - softiweer awood u leh iibsashada howlaha gunnada;
The qalabka caan ugu yihiin Book Of Fastpay, Crazy Halloween, Aztec Silanyo, Dolphins Gold, 777 Diamonds, Miraha & Diamonds, Jungle Treasure, Book Of qolo, iwm Maxaa yeelay, dhammaan dadka isticmaala aan lahayn waayo-aragnimo badan, waxaa jirta fursad ay si play lacag la'aan at Fastpay casino . Demo uma baahna diiwaangelin ama lacag dhigaal ah.
Isla markii la furay, goobtu waxay macaamiisheeda siisay gunno soo dhaweyn ah oo ku saabsan dhammaystirka diiwaangelinta, laakiin maanta fursaddan oo kale ayaa laga saaray liiska mudnaanta. Taabadalkeed, xubnaha cusub waxay helayaan xirmo soo dhaweyn ah. Waxay suurtogal ka dhigeysaa in dib loogu buuxiyo dhigaalka shuruudo wanaagsan.
Marka ugu horeysa ee ugu sareysa, cabirka hadiyada ka socota casino waxay noqon doontaa 100% waxaana lagu kabi doonaa 100 bilaash ah FS. Inta lagu guda jiro deebaajiga labaad, macmiilku wuxuu heli doonaa gunno ah 75% oo ah lacagta lagu shubo koontada. Qadarka ugu yar ee deebaaji ee dhigaalka deebaaji ugu horeeya waa 1000 RUB, 20 EUR, 20 USD, 8800 DOGE, 0.05 ETH, 0.002 BTC, 0.4 LTC, 0.096 BCH. Waqtiga lagu sharxi karo waa 2 maalmood. Xaaladdan oo kale, sharadku waa x50.
Macaamiisha caadiga ah, shuruudo gaar ah ayaa lagu dabaqayaa. Barnaamijka VIP wuxuu ka kooban yahay 10 heerar wuxuuna ka kooban yahay tiro badan oo hadiyado wacan oo kala duwan, dalabyo waaweyn iyo lacag celin.
Si loo sahlo, waxaad dib u buuxin kartaa deebaajiga oo waxaad kala bixi kartaa faa'iidada lacagta soo socota: RUB, USD, EUR, NZD, CAD, AUD, PLN, NOK, JPY, ZAR, BTC, BCH, LTC, DOGE, ETH. Casino Fastpay wuxuu aqbalaa cryptocurrency, taas oo si weyn u kordhisa soo jiidashada indhaha martida, maxaa yeelay lama cashuuro.
Macaamillada lacageed ee casino 'Fastpay casino' waxaa fuliya ku dhowaad dhammaan nidaamyada lacag-bixinta ee caanka ah. Hababka ugu caansan ee lacagaha loo xareeyo waa: Visa, Mastercard, Maestro, Webmoney, Ecopayz, Neteller, Mifinity, Skrill, Muchbetter, Rapid transfer, EcoVoucher, Neosurf, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Tether.
Rasiidhada isla markiiba waa la fuliyaa mana u baahna guddi, marka laga reebo Webmoney. Qadarka buuxinta deebaajiga ayaa ku kala duwan 10 ilaa 4000 EUR/USD. Nidaamka loo yaqaan 'cryptocurrency', lacagta ugu yar waxay noqon doontaa 0,0001 BTC, 0.01 ETH, 0.01 LTC, 1 DOGE, 0.001 BCH.
Waad ka noqon kartaa macaashka adoo adeegsanaya Webmoney, Ecopayz, Neteller, Skrill, Muchbetter, Rapid Transfer, Mifinity, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Tether. Nidaamka waxaa lagu sameeyaa bilaa amar wuxuuna qaadanayaa ilaa laba saacadood. Si loo xaqiijiyo aqoonsiga, isticmaaluhu waa inuu maraa nidaamka xaqiijinta.